လူငယ်တို့အတွက် ခေတ်သစ်ဓမ္မစကြာ အညွှန်း (ဒုတိယပိုင်း) - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
လူငယ်တို့အတွက် ခေတ်သစ်ဓမ္မစကြာ အညွှန်း (ဒုတိယပိုင်း)
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှ August 1, 2012 5:46pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကတမေ ဒွေ၊ ယော စာယံ ကာမေသု ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂေါ ဟီနော ဂမ္မော ပေါထုဇ္ဇနိကော အနရိယော အနတ္တသံဟိတော၊ ယော စာယံ အတ္တကိလမထာနုယောဂေါ ဒုက္ခော အနရိယော အနတ္တသံဟိတော။
ဘယ်တရားနှစ်ပါးလဲဆိုရင်- ၁။ ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂ-ဘ၀ဟူသည်မှာ ချမ်းသာတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားကာ နှစ်သက်ဖွယ်ရူပါရုံစသော ကာမဂုဏ်ငါးပါးတို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားခြင်းသာဖြစ်၍ ကြည်နူးမှုအတိသာတည်း။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်များသာတည်း။ ။
၂။ အတ္တကိလမထာနုယောဂ-ဘ၀ဟူသည်မှာ ကြိုးစားရုန်းကန်ခြင်းဖြင့်သာ လည်ပတ်ရှင်သန်နေရသောကြောင့် ဒုက္ခအတိသာတည်း။ ဆင်းရဲခြင်းအစုအပုံများဖြင့် ပေါင်းစုထားသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ သုခကင်းဝေးရာဌာနဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း ထိုဘ၀ကိုရခြင်းသည် ဘာမျှအကျိုးမရှိပေ။ ။
ဤကာမသုခလ္လိကာနုယောဂ,အတ္တကိလမထာနုယောဂ-တရားနှစ်ပါးတွင် အတ္တကိလမထာနုယောဂတရားသည် ထင်သာမြင်သာရှိပေသည်။ ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂတရားကား သဘောပေါက်သယောင်ယောင်ရှိကြသော်လည်း ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ နားလည်သူရှားလေသည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်လူငယ်တို့ အလွယ်တကူသိမြင်စေရန် ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂတရားကို ရှင်းလင်းပြပါမည်။ ။
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ယခုနှစ်မှပြန်၍ရေတွက်သော် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၂၆၃၆)ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယအင်ပါယာအတွင်းရှိ ကပိလ၀တ္ထုတိုင်းနိုင်ငံတွင် ခမည်းတော်သုဒ္ဓေါဓန+မယ်တော်မဟာမယာဒေ၀ီတို့မှ မွေးဖွားသန့်စင်ခဲ့သော သားကြီးသြရသဖြစ်လေသည်။
တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်တွင် ကြင်ယာတော် ယသော်ဓရာနှင့်လက်ဆက်၍ ထီးနန်းစတင်စိုးစံခဲ့သည်။ ရမ္မ,သုဘ,သုရမ္မ-ဟူသော ရွှေနန်းသုံးဆောင်တွင် ယသော်ဓရာအမှူးရှိသော မောင်းမပေါင်းလေးသောင်းခြံရံလျှက် နတ်တို့၏စည်းစိမ်နှင့်တူသော လူတို့၏စည်းစိမ်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ခံစားခဲ့သည်။
ထိုအချိန်ကာလအတွင်း ဘုရားလောင်းသည် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအကြောင်းကို မြူမျှပင်မစဉ်းစားမိချေ၊ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ချောမောလှပသောအမျိုးသမီးငယ်များ၏ ရူပါရုံ,သဒ္ဒရုံ,ဂန္ဓရုံ,ရသာရုံ,ဖောဌဗ္ဗာရုံ-စသော အာရုံငါးပါးကြားတွင် နစ်မျောနေခဲ့သည်။ ဇာတိ-အကြောင်းကိုလည်း မတွေးတော၊ ဇရာ-အကြောင်းကိုလည်း စိတ်မ၀င်စား၊ ဗျာဓိ-အကြောင်းကိုလည်း မကြံစည်၊ မရဏ-အကြောင်းကိုကား ကြားပင်မကြားဖူးချေ။ ထိုကဲ့သို့သော စည်းစိမ်များကြား၌ နစ်မျောနေခြင်းသည် ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂအကျင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂ-ဟူသည်မှာ တပ်မက်ဖွယ်ကာမဂုဏ်အာရုံတွေကို နှစ်သက်စွဲလမ်းကာ ထိုကာမဂုဏ်တရားတွေကိ ကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်အားထုတ်ခံစားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်သက်ဖွယ်ကာမဂုဏ်အာရုံဟူသည်မှာ ခံစား၍မတင်းတိမ်နိုင်လောက်အောင် ကောင်းမွန်သော အဆင်း,အသံ,အနံ့,အရသာ,တွေ့ထိစရာတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။
လှပသောရူပါရုံအစရှိသော အာရုံတို့ကို ခံစားနေသောသူသည် မတင်းတိမ်သာအခါများတွင် အားမလိုအားမရဖြစ်လာပေသည်။ ဤသည်မှာ မကျေနပ်,မရောင်ရဲနိုင်ခြင်း ဒေါသ-အကုသိုလ်တရားနှင့် ထပ်ခါထပ်ခါခံစားချင်သော လောဘ-အကုသိုလ်တရားများပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအာရုံတို့ကိုခံစားခြင်းကြောင့် ပြုသင့်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို မေ့လျော့နေတတ်သည်။ ဤသည်မှာ တွေဝေတတ်သော မောဟ-အကုသိုလ်တရားပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအာရုံများထဲ၌သာ ကျင်လည်ကျက်စားနေသောကြောင့် ငိုက်မြည်း,မိန်းမောခြင်းများ ဖြစ်လာရပေသည်။ ဤသည်မှာ ထိန,မိဒ္ဓ-အကုသိုလ်တရားပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် ကာမဂုဏ်အာရုံများကိုသာ နှစ်သက်လေ့ရှိသောကြောင့် အရှက်အကြောက်များ နည်းပါးလာရပေသည်။ ဤသည်မှာ အဟိရီက,အနောတ္တပ္ပ-အကုသိုလ်တရားများပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအာရုံများ၏အစွမ်းကြောင့် စိတ်ကိုစုစည်းနိုင်မှု နည်းပါးလာရသည်။ ဤသည်မှာ ပျံ့လွင့်တတ်သော ဥဒ္ဓစ္စ-အကုသိုလ်တရားပင် ဖြစ်ပါသည်။
လောကတွင် ဤကာမဂုဏ်သည်သာ အမြတ်ဆုံး/အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သည်။ အနှစ်သာရပြည့်ဝသည်ဟူသော ခံစားချက်များ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ ဤသည်မှာ အမြင်မှားသော ဒိဋ္ဌိ-အကုသိုလ်တရားပင် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိပိုင်ဆိုင်သော ကာမဂုဏ်အာရုံများပေါ်၌ အခြားသူများ တန်းတူလိုက်မှာစိုးရိမ်သော ၀န်တိုမှုများဖြစ်လာရသည်။ ဤသည်မှာ မစ္ဆရိယ-အကုသိုလ်တရားပင် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိစည်းစိမ်များကဲ့သို့ အခြားသူများအနေဖြင့် မပိုင်စေရန်စိတ်ဆန္ဒများ ဖြစ်လာရပေသည်။ ဤသည်မှာ မနာလိုမှု ဣဿာ-အကုသိုလ်တရားပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤကာမဂုဏ်များကို ခံစားမှုအားကြီးသူတို့သည် ဦးနှောက်မကြည်လင်ခြင်း၊ အာသာမပြည့်ဝခြင်း၊ စိတ်ညည်းညူခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာရပေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာသောအခါ ခံစားသူသည် မိမိပြုလုပ်ခဲ့သောအရာတို့ကို တွေးတော၍ နောင်တတရားများ ဖြစ်တတ်ပေသည်။ ဤသည်မှာ ကုက္ကုစ္စ-အကုသိုလ်တရားပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ အကုသိုလစေတသိက်တစ်ဆယ့်လေးပါးတို့သည် ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂတရားကို ခံစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးတရားများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကာမသုခလ္လိကာနုယောဂ+ကာမဂုဏ်အရသာသည် အာသာပြည့်ဝကောင်းသောအရသာမျိုး မဟုတ်ပေ။ တခဏမျှသာ ပြည့်ဝသည်ဟုထင်ရပြီး မကြာခင်အချိန်မှာပင် ပြည်လည်အသက်ဝင်တတ်သော အရသာမျိုးဖြစ်ပေသည်။ မပြည့်ဝလေ ခံစားချင်လေ၊ ခံစားလေ မပြည့်ဝလေဖြစ်လာတတ်ပေသည်။
ကာမဂုဏ်အာရုံကြောင့် အောင်မြင်မှုများဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကို ကမ္ဘာကျော်ဂေါက်သီးကစားသမား တိုက်ဂါးဝုဒ်ကိုကြည့်လျှင် သိနိုင်ပါသည်။ ကာမဂုဏ်အာသာမပြည့်ဝသောကြောင့် အချို့သူများမှာ စိတ်ပင် ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတတ်ပေသည်။ ထိုရောဂါမျိုးကို အမျိုးသမီးများတွင် အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပေသည်။ အချို့သူတို့သည် သားဖွားပြီးမကြာမီပင် ကိုကာမဂုဏ်ကိုခံစားခြင်းနှင့်အခြားအရာများ၊ အကြောက်တရားများကြောင့် မီးယပ်ကျိုးရောဂါခံစားရသည့်အပြင် သေရာပါအမျိုးသမီးရောဂါများပင် ဖြစ်သွားတတ်ပေသည်။ ဤသည်မှာ ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂ-တရား၏ အကျိုးရလဒ်များမှ သာဓကအနည်းငယ်ထုတ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) Views: 28
ဘလော့အမျိုးအစား(ဗဟုသုတ) Like0members like this
Top News · Everything moh moh commented on dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'"Thzalot I agree your thinging wisdom all rihght congratulation fri your knowledge excellent .Pls…"1 hour ago♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ liked dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'1 hour agomoh moh liked dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'1 hour agoNilar Htet Htet Aung commented on dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'"Thanks for sharing. I agree your thinking of the most important thing in life. I'll try my…"1 hour agodimplemit posted blog postsဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ2 hours agoashinvishittathara commented on နီစံ (အနီ)'s group 'အဘိဓမ္မာ ဌာန'"ဒီနေရာကိုလာလည်ခွင့်ရလို့အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်"3 hours agoashinvishittathara joined နီစံ (အနီ)'s groupအဘိဓမ္မာ ဌာန-အဘိဓမ္မာ သင်ယူလေ့လာရန် -အဘိဓမ္မာ ရေးရာ ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ရန်See More3 hours ago 19
kham liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'3 hours agoမတင်တင်မိုး commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သင့် အချက်များ'"Thanks..."3 hours agoHtain Lin Oo liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ'4 hours agoကောင်းမြတ်ဇော် commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'"စင်္ကာပူမှ အလှူရှင်တဦးမှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ $၅၀ လက်ခံ ၇ရှိပါသည်။ ယခုလို စေတနာသုံးတန် ပြဠာန်းကာ လှူဒါန်းမူ…"4 hours agoလှိုင်ကျော်ထွေး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'"အလှူရှင် မနန်းယုမှ လှူဒါန်းငွေကျပ်-၂၀၀၀၀/-(ကျပ် နှစ်သောင်းတိတိ) ကို လက်ခံရရှိပါတယ် ခင်ဗျာ..။ယခုလို…"5 hours ago More... RSS